Russiya: dareenka dadweynuhu ka qabo xiriirka USA & EU oo sii xumaanaya (Ra’yi ururin cusub) – Kasmo Newspaper
Russiya: dareenka dadweynuhu ka qabo xiriirka USA & EU oo sii xumaanaya (Ra’yi ururin cusub)
Updated - December 20, 2017 1:59 pm GMT
London (Kasmo), Tirada muwaadiniinta Ruushka ah ee qaba in dalkoodu u baahanyahay xiriirka Maraykanka iyo dalal kale oo reer Galbeed ayaa 75% sare u kacday sannadkaan, halkii ay ka ahayd 62% bishii September 2016kii.
Xogta Warbaahintu ka helayso xarunta “Levada-Center”, 16% oo qur ah dadkii lagu waraysaty baaritaan ra’yiga ah (Poll), ayaa ka soo horjeestay, marka loo eego baaritaankii bishii September 2016 oo tiradu ahayd 24%.
Laakiin waxaa hoos u dhacday tirada dadka walaaca ka qaba go’doonka Caalamiga ah ee Russiya: 29% halkii ay 40% ka ahayd bishii Agosto 2016kii.
Sidoo kale waxaa hoos u dhacday tirada inta ka walaacsanayd cunaqabatayntii dhaqaale ee reer Galbeedka, oo noqotay 28%, halka markii hore ah ka ahayd 39%.
Marka la eego ra’yi ururinta laga qaaday 1 ilaa 5 Disember 2017, dad gaaraya 1,600 oo ku nool 137 magaalo ee 48ka Gobol ee Russiya, intooda badan kama qabaan wax walaac ah go’doominta Caalamiga ah: 66%, iyo cunaqabataynta: 68%.
Khubarada Cilmiga Bulshadu waxay la tahay in laga bilaabo horraantii sannadkaan ay sare u socoto tirada dadka fikradaha gurracan (Negative) ka qaba Maraykanka: 60%, halkii ay ka ahayd 49% bishii Jenaayo ee hore.
Waxaa sidoo kale kordhaya tirada Ruushka aan kalsoonida ku qabin Midowga Yurub: 54%, halkii ay ka ahayd 47% sannadkii hore.
Dadweynaha Ruushka, 24% oo qur ah ayaa qaba in xiriir lala lahado Maraykanka, halka markii hore 37% ay ka ahaayeen, marka loo eego Midowga Yurub, tiradu waxay hoos ugu dhacday 28%, halka sannadkii hore ay ka ahayd 39%.
Koofur Afrika: Beerihii caddaanka oo loo celinayo madowga